यस्ता छन् प्रचण्डले गरेका पाँच महाभूल !
प्रचण्डले अहिले सम्म गरेका केहि भूलका बारेमा चर्चा हुनेछ। युद्धकालको सबै छाडेर नयाँ तरिकाबाट राजनीति गर्न सुरु गरेसँगै नेपाली राजनीतिले पनि नयाँ मोड लिएको थियो। उनले गरेका केहि महाभूल यस लेखमा उल्लेख रहने छ।
प्रचण्डका पाँच महाभूल
पहिलो भूल- गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले प्रचण्डलाई हात दिएर लोकतान्त्रिक दुनियाँमा तानेनन् मात्र, उनले प्रचण्डलाई टेको पनि दिएर ०६२/६३ को जनआन्दोलन पार लगाए । गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो । खासमा गणतन्त्र ल्याउने टेको बनेकै हुन्, गिरिजाप्रसाद । तर प्रचण्डले उनलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्न दिएनन्, धोका दिए । गिरिजाप्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपति बनाएको भए, नेपाली गणतन्त्र यतिबेलासम्म न बरालिन पाउँथ्यो न त देश र जनताले सकस नै पाउनुपथ्र्यो । बेलैमा गणतन्त्र संस्थागत पनि हुने थियो ।
प्रचण्डको यो पहिलो भूल थियो र यसलाई सच्याउन चाहेर पनि अब सकिँदैन । राजनीतिक भूलहरू यस्तै हुन्छन् । जसरी बगेर गएको वस्तुले भँगालो पार गरेपछि फेरि त्यो माथि आउन सक्दैन किनभने त्यसले अर्कै गति र स्वरूप लिइसकेको हुन्छ । त्यसले एक अवस्थितिबाट अर्को रूप लिइसकेको हुन्छ । कुखुराको फुलबाट चल्ला निस्किसकेपछि त्यसलाई जसरी अन्डाभित्र हाल्न सकिँदैन राजनीतिमा पनि राजनीतिज्ञले ख्याल गर्नैपर्ने र चुक्न नहुने यस्तैमा हो ।
दोस्रो भूल- प्रचण्डको दोस्रो महाभूल हो, कटवाल प्रकरण । तीन महिना पनि समयावधि बाँकी नरहेको सेना प्रमुख (सेना भनेको राज्यको मेरुदण्ड नै हो) लाई खण्डित गरे प्रचण्डले । सेनालाई व्यावसायिक रूपमा चल्न दिइएन भने त्यसले धेरै कुरालाई अपांग गराउने सामथ्र्य राख्छ । राख्यो पनि ।
एक राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकले भने, नेपाली सेना न भारत न त चीनसँग युद्ध लड्न बनाइएको हो । यो त अखण्ड, स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन नेपाली भूमिको रक्षा र जनताको सुरक्षाको अनुभूति दिने संयन्त्र हो । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर ब्यारेकमा राखेर व्यावसायिक तालिमदेखि स्कुल, अस्पताल, बाटो खन्नेदेखि पेट्रोलपम्प चलाउनेसम्म, विद्युत् गृह रक्षादेखि टेलिफोनका टावर सुरक्षा गर्नेसमेतको जिम्मेवारीमा सेना परिचालन गरिएको छ । तर यस्तो सेनालाई हठात हस्तक्षेप गरी बच्कनापन देखाए प्रचण्डले । यो उनको दोस्रो महाभूल थियो । यसैको कारण राजीनामा गरेर प्रचण्ड सत्ताच्युत हुन पुगे ।
यही घटनामा उनले पाएको सत्ता फर्कनै नसक्ने गरी गुम्यो । त्यही भूलका कारण माओवादी पार्टी फुटेर पाँच टुक्रा भयो । प्रचण्डले प्राप्त गरेको साख भविष्यमा नफर्किने गरी गुम्दै गयो । कद घट्दै गयो । प्रचण्ड यति बाउन्ने बने कि शेरबहादुर देउवाको वैशाखीमा चढेर उनले आफ्नो विगतको उचाइ कायम गरेर अग्लो देखिने उद्योगमा लागे । जबकि यसअघि ओलीको काँधमा बसेकाले टावरिङ बनेका थिए प्रचण्ड । उनले त्यतिबेलै मुख खोलेर गिरिजाप्रसादपछिको सर्वमान्य मै हुँ भन्न पाएका थिए ।
तर यो सबै ओलीले काँध थापिदिएको कारण थियो । शेरबहादुरले बूढानीलकण्ठबाट उत्तिसको वैशाखी देखाएका के थिए, प्रचण्ड धेरै अग्लो हुन्छु भनेर त्यतैतिर लहसिए । यसले गर्दा प्रचण्ड पिँध नभएको लोटाको अवस्थामा आइपुगेका छन् । एक व्यंग्य चित्रकारले त कार्टुन नै बनाए, शेरबहादुरले प्रचण्डलाई पगाहा लगाएको !
तेस्रो भूल- दोस्रो संविधानसभा चुनावको मतपरिणाम आइनसक्दै प्रचण्डले पेरिसडाँडामा बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी राखेर जनअभिमतको धज्जी उडाएर तेस्रो भूल गरे । चुनावमा धाँधली भयो भने । त्यसैले हामीले हार्‌यौं अब चुनाव बहिष्कार गर्छौं भन्दै मतगणनास्थल बहिष्कार गर्ने बौलठी देखाए । यसको कारण जनताबीच प्रचण्डको केही प्रभाव रहेनछ र चुनाव गर्ने हो भने प्रचण्डका उम्मेदवार हार्छन् भन्ने प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्‌यो ।
यो राजनेताले गर्नै नहुने गल्ती हो । यस्तो गल्ती गर्ने राजनेताले आफ्नो अस्तित्व मात्र गुमाउँदैन । उप्रति आम जनतामा रहेको सम्मान ह्रास भइ शून्यमा झर्न पुग्छ ।
चौथो भूल- प्रचण्डको चौथो भूल केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पार्टीलाई ओलीले सरकारमा सहभागी मात्र बनाएका थिएनन्, स्वयं प्रचण्डलाई राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि बनाएका थिए । सरकार र पार्टीहरूका हरेक निर्णयमा प्रचण्डको सहमति लिएर मात्र अगाडि बढ्ने गरेका पनि थिए । कतिपय सन्दर्भमा त आफूलाई अप्रिय र नाफा–नोक्सानको भाषामा आफ्नै पार्टीलाई नोक्सान पुर्‌याउने निर्णय गरे भनेर ओलीले आफ्नै पार्टीको आलोचना खेप्नुसमेत पर्‌यो । ओलीको शासनकालमा प्रचण्डले कतिसम्म छुट पाएका थिए भने प्रधानमन्त्रीका दलभन्दा उपप्रधानमन्त्रीदेखि आकर्षक मन्त्रालय प्रचण्डकै रोजाइमा परेका थिए ।
प्रचण्डले ओली सरकारलाई आफ्नो अविश्वास नजनाउँदासम्म सबैभन्दा धेरै ओलीका सल्लाहकारको रूपमा ओलीसँग समय व्यतीत प्रचण्डले नै गरेका थिए ।
कतिपय प्रसंगमा ‘एजेन्डा ओलीको, निर्णय प्रचण्डको’ भनेर पनि टीकाटिप्पणी हुने गथ्र्यो । भारतीय नाकाबन्दीका बेला यी दुई एक ठाउँमा रहे भने भनिन्थ्यो, मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रियता अझ बलियो हुन सक्छ र परचक्री तथा आत्मघातीहरूबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ । जस्तै कष्ट पनि सहन जनता तयार छन् भन्ने सञ्चार भएको थियो ।
राजनीतिक वृत्तमा त यतिसम्म हल्ला चल्यो कि एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर केपी ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउँदैछन् भन्ने जनमत वामपन्थी र नेपाली कम्युनिस्ट कित्तामा एउटा तरंग नै सिर्जना भएको थियो । अब प्रगतिशील—वामपन्थीको एउटा पार्टी र अर्को कांग्रेस पार्टीको दुईदलीय धु्रवीकरणमा नेपाल जान लागेको परिदृश्यहरूको प्रक्षेपण विश्लेषक गर्न थालेका थिए । त्यसपछि देशमा भ्यागुताको धार्नी, मुसा प्रवृत्ति र सांसद खरिदबिक्री प्रकरण सदाको लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत हुँदै थियो । तर यी सबै सम्भावनालाई प्रचण्डको ओली सरकारबाट माओवादी छुट्टिने निर्णयले जबर्जस्त घात गर्‌यो ।
पाँचौं भूल- पाँचौं प्रदेशलाई खण्डित गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव र संविधान संशोधनको नाउँमा मुलुकलाई नै एकत्रित हुन नदिने अभियानमा लागे । एजेन्डाको मतियार पनि बने, हतियार पनि बने ! उनको पछिल्लो कार्यले आपसी किचलोबाट तंग्रिन लागेको देशलाई फेरि थुप्रै असन्तुष्टिको दलदलतिर लैजान खोजेको देखिँदै छ । प्रचण्डको यो महाभूलप्रति उनकै पार्टीका जेन्युइन नेता तथा कार्यकर्ता सहमत छैनन् । उनीहरू प्रचण्डसँग विमति राख्दै प्रस्तुत भइरहेछन् ।
जसको लागि प्रचण्ड पाँचौं प्रदेश टुक्र्याउने कदम उठाए, यसलाई तिनीहरू पनि जो आफूलाई ‘लाभग्राही’ सम्झन्छन्, यसकार्यमा सहमत छैनन् । कसको रणनीतिक लाभको लागि प्रचण्ड पाँचौं प्रदेशमा मधेस र पहाड छुट्ट्याउँदैछन् ? अब के गर्ने ?
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दल मिलेर राष्ट्रिय चुनावी सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । ०७२ असोज ३ गत कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एक भएर नेपालको संबिधान जारी गर्दै देशलाई अस्थिरता, अन्योल र आशंकाको भ्रामरीबाट त्राण दिएर एकता प्रदर्शन गरेका थिए ।
अब त्यसैगरी तीनै दल र त्यसका नेताहरू केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाएर चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ र मुलुकलाई चुनावमय बनाउन लाग्नुपर्छ । यसको लागि पहिलो स्थानीय चुनाव, दोस्रो प्रादेशिक र तेस्रो संसदीय चुनावको घोषणा अविलम्ब हुनुपर्छ ।
-कृष्णमुरारी ढुंगेल ,अन्नपूर्ण पोस्ट
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ११, २०७५१७:२१